UMTHANDAZO OYA KUMNTWANA UYESU WENKQUBO YOKHUSELEKO LWENTSAPHO
Ukuba usapho lwakho lunobunzima, kwaye ufuna ukwazi ukuba ungajongana njani nalo umthandazo kuMntwana onguYesu ukusuka kwintaba Ukukhusela nokunyamekela usapho lwakho, abahlobo okanye wena buqu, ukwindawo elungileyo, kuba kweli nqaku siza kukufundisa ngendlela yokucela uncedo kuMntwana uYesu.
1 Umthandazo kwiNtsana uYesu wasePrague ukukhusela usapho lwakho
2 Umthandazo wokubuza usana olunguPrague ngommangaliso
3 Umthandazo wokubuza impilo yomntu ogulayo
4 Imbali emfutshane yokuzinikela kwiNtsana enguYesu yasePrague
Umthandazo kwiNtsana uYesu wasePrague ukukhusela usapho lwakho
Owu, uYesu ongummangaliso, i Usana olunguPragueYolulani iingalo nezandla zenu ukuze nisikelele ikhaya lethu, kwaye nihoye amagumbi, namagumbi ”.
"Sibhengeza ukuba ungumnini kunye neNkosi yethu, kwaye ngenxa yeso sizathu sicela ukuba uvumele imimoya elungileyo ingene kwaye ungavumeli ezimbi zidlule."
"Siyakucela, Mntwana oNgcwele, ukuba usikelele isonka sethu, kwaye ukuba amabhongo kunye neemfuno zethu zaneliswe zizipho osinika zona yonke imihla."
"Sikhulule kwizono, ububi, umlilo, izikhukula, sikhusele kubantu abaneenjongo ezimbi, kwaye ukhusele intliziyo yekhaya lethu elingcwele."
"Owu Iintsana ezingcwele uYesu wasePrague, yenza abantwana bahlambuluke ebusweni bakho nangomoya wakho oyingcwele, kwaye bangcwaliswe ngokuphefumla kwakho komoya ”.
"Siyakubongoza ukuba ugcine isono ekuphambukeni endleleni yakho, kwaye sicela wena, Owu, Usana olunguPragueNgamana ungasikhuthaza ukuba sithwale umnqamlezo obewuthwele kuthi ”.
"Siyakubuza ngoko, Umntwana oNgcwele uYesuNgamana ungazolula izandla zethu phezu kweli khaya lethu silithandayo, ukuze silisikelele kwaye silikhusele kububi, namhlanje nangamaxesha onke ”.
Umthandazo wokubuza usana olunguPrague ngommangaliso
Owu, Iintsana ezingcwele uYesu wasePrague! Ndijikela kuwe, kwaye ndikucela ngoMama wakho osikelelweyo, ukuba undincede kobu bunzima ndihamba nabo:
(yithi okwangoku ummangaliso ofunekayo) ”.
"Ndicela oku ngokholo, kuba ndikholelwa ngokuqinisekileyo ukuba ubungcwele bakho bunokundinceda koku. Ndijonge phambili ekufumaneni ubabalo lwakho olungcwele.
“Ndikuthanda ngentliziyo yam yonke nangamandla onke omphefumlo wam. Ndiyaguquka ngokunyanisekileyo nangentliziyo epheleleyo kuzo zonke izono zam, kwaye ndiyakucela, oh kulungile kwam Umntwana onguYesuNdinike amandla okuphumelela ngokusuka kubo ”.
"Ndizimisele ukuba ndingaphindi ndikucaphukise, kwaye ndizinikela kuwe emzimbeni nasemphefumlweni, ndikulungele ukubandezeleka kuko konke kunokuba ndikucaphukise kwaye ndingakukhathazi"
"Ukusukela ngoku ndifuna ukukukhonza ngokuthembeka nangokuzinikela."
“Ngothando lwakho lobuthixo, owu, Mntwana oyiNgcwele, ndiya kubathanda abamelwane bam njengoko ndizithanda ngako. Mntwana ogcwele amandla, oh Yesu, ndiyakubongoza kwakhona ukuba undincede kule meko inzima: (phinda ngokholo olukhulu isicelo soncedo olufunekayo) ”.
"Ndiphe ubabalo lokuba ndikubambe ngonaphakade, ndikunye noMama wakho oNgcwele uMariya noJoseph, sikunqule neeNgelosi eziNgcwele zeNkundla yaseZulwini."
Ukuba uyifumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: Umthandazo kumntwana wezempilo .
Umthandazo wokubuza impilo yomntu ogulayo
Owu, Iintsana ezingcwele uYesu wasePrague, umnini wobomi kwaye ukufa, nangona ndingafanelekanga kwaye ndinesono, ndimi phambi kwakho ndithandazela impilo (yalowo kucelwa ubabalo ukuba abizwe ngegama apha), endimthandayo kwaye ndifuna ukuba umncede ”.
"Umntu endimbeka kuwe usebunzimeni obukhulu, kwaye uxhelekile yintlungu, kwaye akakwazi ukufumana enye indlela yokuphuma ngaphandle kwamandla akho onke, apho abeka khona onke amathemba akhe kunye nokholo lwakhe ukuze aphilise."
“Ndikhulule, owu Mntwana oyiNgcwele, gqirha waseZulwini, zonke iintlungu zakhe, mkhulule kuko konke ukubandezeleka kwakhe kwaye umnike impilo egqibeleleyo; ukuba oku kuyahambelana nentando yobuthixo kunye nokulunga komphefumlo wakhe ”.
Emva komthandazo, kuya kufuneka uthandaze uBawo Wethu, Yibonge uMariya, kunye noGloria.
Imbali emfutshane yokuzinikela kwiNtsana enguYesu yasePrague
Ukuzinikela kuye Iintsana ezingcwele uYesu wasePrague phakathi kwamaKristu sele iinkulungwane eziliqela. Ngokukodwa, isiganeko esibalulekileyo ekuzinikeleni kwakhe ngumnikelo womfanekiso oqingqiweyo we Iintsana zikaThixo zasePrague, ngu-Princess Polixena Lobkowitz waya kwiifreyimu zaseKarmele ngo-1628.
Abathembekileyo bakholelwa ukuba inani Usana olunguPrague yayikhusela ikhaya loonongendi bamaKarmele ngexesha lokuphanga kunye neemfazwe ePrague.
Emva kokuphela kwamadabi, inani le Umntwana onguYesu Wabekwa emva kwesibingelelo esikhulu, apho wafunyanwa khona, ngaphandle kweengalo zakhe, ngubawo uCyril, owayebuyile, ngokholo, kwikhaya leemonki, eshiywe emva kwekhefu lemfazwe ePrague.
Kuthiwa xa utata u-Cirilo efumene umfanekiso oqingqiweyo, ngaphandle kweengalo, wafumanisa umbono ka Umntwana onguYesu, owathi, ngokwentsomi, «Ndenzele inceba, nam ndiza kuba nenceba kuwe. Ndinike izandla zam, ndikunike uxolo. Okukhona undizukisayo, kokukhona ndiya kukusikelela.
Emva kwexesha lo mfanekiso ubuyisiwe, kwaye wakhiwa, ngenxa yeNkosazana uPolixena Lobkowitz uqobo, indawo engcwele apho abantu abavela kwihlabathi liphela banokuzimasa khona. el mundo ukucela uncedo ku Usana olunguPrague. Ngale ndlela, ukuzinikela kwaqala ukusasazeka kwiYurophu iphela, emva koko kwafika eMelika, kwaye kwaphela kwihlabathi liphela.
Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye ufuna ukwazi ngakumbi malunga nemithandazo onokuyithandazela ukukhusela usapho lwakho, kunye nokucela uncedo ngokusebenzisa a umthandazo kwiintsana uYesu wasePragueBukela le vidiyo ilandelayo: